Apple Watch တွင် podcast စည်းညှိခြင်းကိုဘယ်လိုပြုပြင်မလဲ ငါက Mac ပါ
Apple Watch တွင် Podcast Sync ပြုလုပ်နည်း
Apple Watch တွင် Podcasts များနှင့်ကျွန်ုပ်တို့အကြိုက်ဆုံး Podcasts များကိုတစ်ပြိုင်တည်းချိန်ကိုက်ခြင်းအားမည်သို့စိတ်ကြိုက်ပြုပြင်နိုင်သည်ကိုယနေ့ကျွန်ုပ်တို့တွေ့မြင်ရမည်။ ၎င်းသည်အလွန်စိတ် ၀ င်စားစရာကောင်းသော option တစ်ခုဖြစ်ပြီးသုံးစွဲသူများစွာ edit လုပ်ရန်မရှုပ်ထွေးသောကြောင့်တည်းဖြတ်ခြင်းမပြုနိုင်သော်လည်းအမှန်တကယ်နှင့်ဘာမှမဆိုင်ပါ ၎င်းသည်အလွန်ရိုးရှင်းလွယ်ကူစွာပြုပြင်ပြောင်းလဲနိုင်သည်.
ဒီနှင့်အတူ, ငါတို့အောင်မြင်ရန်သွားကြသည်ငါတို့ရှိသမျှသည်သောကွောငျ့ဖွစျသညျ တရားဝင် Apple Podcasts app ထဲမှာစာရင်းသွင်းခြင်း စမတ်နာရီနှင့်အလိုအလျောက်ထပ်တူပြုပါ။ ၄ င်းတို့ကြားပြီးနောက်အလိုအလျောက်ရှင်းလင်းပါမည်။ ဤလုပ်ဆောင်ချက်များသည်ကျွန်ုပ်တို့၏နာရီသည်အားသွင်းနေစဉ်ပုံမှန်အားဖြင့်လုပ်ဆောင်သည်။
Podcasts များကို Apple Watch နှင့်တစ်ပြိုင်တည်းချိန်ကိုက်ပါ
ဤထပ်တူပြုခြင်းဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့ရရှိသောအရာသည်အလွန်ကောင်းမွန်သည်၊ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အားမည်သည့်အက်ပလီကေးရှင်းတွင်မဆို podcasts များကိုနားထောင်ရန်ခွင့်ပြုသည်။ ဖြစ်စဉ်သစ်အပါအဝင်အလိုအလျောက် update လုပ်နေကြသည် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Podcast တခုကိုဖြည့်စွက်ကြောင်း။ သိသာထင်ရှားတဲ့အချက်ကတော့ iPhone ကိုအသုံးမပြုဘဲနဲ့ Apple Watch မှာ download လုပ်ထားတဲ့ podcasts တွေကိုလည်းခံစားနိုင်မှာပါ။
ကျွန်ုပ်တို့လုပ်ရမယ့်အရာက iPhone ရဲ့ Watch application ကိုဖွင့်ပြီးသတ်မှတ်ချက်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကြိုက်နှစ်သက်ရာကိုချိန်ညှိပါ။ ဒီဟာကိုလုပ်ရမယ် My Clock ကိုထည့်။ Podcasts ကိုရွေးပါ။
ဤတွင်ကျွန်ုပ်တို့ Apple Watch မှကိုယ်တိုင်နားထောင်လိုသော podcasts များကိုရွေးချယ်ခွင့်ပြုသည့်“ Add spied on” မှ Custom option ကိုရွေးချယ်နိုင်သည်။ သင်၏ podcast စာကြည့်တိုက်တွင်ဖြစ်စဉ်များကိုပြလိမ့်မည် ထို့အပြင်ကျွန်ုပ်တို့မှသတိပေးချက်များကိုနာရီသို့ရောက်လိုပါကသို့မဟုတ် box ကို uncheck လုပ်ခြင်းဖြင့်လည်းရွေးချယ်နိုင်သည်။ အတိုချုပ်ပြောရမယ်ဆိုရင်၊ ဒါတွေကသေးငယ်တဲ့ချိန်ညှိချက်တွေပါ။ ကျွန်တော်တို့က Apple ရဲ့စမတ်နာရီမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အကြိုက်ဆုံး Podcasts များကိုအနည်းငယ်သာခံစားခွင့်ပြုသည်၊ ဟုတ်သည်။ ဇာတိ Apple Podcasts အက်ပ်ကိုသုံးသည်။
စကားမစပ်သင် Actualidad iPhone မှလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များနှင့်ပြုလုပ်သောကျွန်ုပ်တို့၏အပတ်စဉ် podcasts များကိုစာရင်းသွင်းနိုင်သည် ဒီ link ကတဆင့်.
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ငါက Mac ကပါ » Apple » လဲ tutorial » Apple Watch တွင် Podcast Sync ပြုလုပ်နည်း
AirPower နှင့်ပတ်သက်သောသဲလွန်စအချို့ကို Apple ဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်တွင်ဖော်ပြထားခြင်းကြောင့်၎င်းတို့သည်၎င်းင်း၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်ဆက်လက်လုပ်ဆောင်နေသည်ဟုကျွန်ုပ်တို့အားထင်မြင်စေသည်
ဒါက Apple Watch လက်ပတ်ကြိုးနဲ့ထုတ်လုပ်တဲ့ Nomad ရဲ့ AirPods အတွက်ကြည့်ပုံပါ